November | 2009 | Moep1's Blog
Electric Power No. 1 Minister looks into progress of Yeywa Dam project
(NAY PYI TAW, 12 Nov, 2009)
Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min on9November heard reports on completion of the diversion tunnel, the entrance and exit to the tunnel, RCC main embankment, spillway and power intake structure, installation of steel pipeline, construction of power plant, water outlet channel and sub-power station and arrangements for storage of water at Yeywa Dam presented by Director U Nay Myo Win at the construction site of Yeywa Dam Project near Ye-Yaman Village, 31 miles southeast from Mandalay.
Director-General U Myint Zaw gaveasupplementary report.
The minister inspected preparations for installation of Diversion Tunnel No.2Gate upstream of the dam and supply of water from the diversion tunnel No. 1.
Afterwards, the minister looked into progress in building the spillway bridge linking left and right embankments and main embankment and other tasks.
Later, the minister viewed construction of the switch yard and the water outlet channel.
Comments Off on Electric Power No. 1 Minister looks into progress of Yeywa Dam project	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
Comments Off on လျှပ်စစ်(၁)၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ရဲရွာရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းစစ်ဆေး	| ရဲရွာ (့Yeywa)	| Permalink
နိုင်ငံတော်၏ စီပွားရေး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ အားထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အတွက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီသည် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကို အမိန့်ကြေညာစာ အမှတ် (၅/၂၀၀၆)ဖြင့် (၁၅-၅-၂၀၀၆) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် ခဲ့ပါသည်။ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော် ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အစရှိသည့် ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများအား ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တာဝန် (၄)ရပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများအား ကာလတိုအဖြစ် ရည်မှန်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ကို အဓိကစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်အဖြစ်မှီခို အားထားဆောင်ရွက် သွားရန်။
(ဂ)အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်မှုရှိစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လေလွင့်မှုများ လျှော့ချရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်။
(ဃ)စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်အသစ်များနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များမှတဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်သွားရန်။
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for November, 2009.